Degdeg:- Somaliland oo ku dhawaaqday in ay qabsatay Deegaano cusub oo katirsan Puntland. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaDegdeg:- Somaliland oo ku dhawaaqday in ay qabsatay Deegaano cusub oo katirsan Puntland.
February 26, 2020 marqaan Faalloyinka, Puntland, Somali News, Somaliland 1
Taliska guud ee ciidamada Somaliland ayaa faah faahin ka bixiyey dagaallo saaka iyo shalay ka dhacay qeybo ka mid ah gobolka Sanaag.
War qoraal ah oo ka soo baxay milatariga Somaliland ayaa waxaa lagu sheegay in saaka abaaro 6:30 subaximo ay Puntland dagaal ka bilowday deegaanka Kadhada oo 18 KM u jira magaalada Yube oo hoostagta gobolkaasi oo dhaca waqooyiga Soomaaliya.
Somaliland waxay sidoo kale warkaan ku sheegtay in dagaalkaasi ay guullo ka soo hoyeen ciidankeeda, islamarkaana ay ku qabsadeen hub iyo gaadiid dagaal intaba.
“Saaka abaaro 6 30 subaximo , waxay ciidamada puntland isku day dagaal ka bilaabeen degaanka kadhada oo 18 km u jira yube , halkaana waxaa isku haleelay ilaalada hore ciidanka qaranka iyo dagaal oogayaasha ciidanka puntland halkaas oo ciidanka qaranku dhirbaaxo lama ilawaana ku dhuftay kana soo hooyeen guulo iyagoo ka qabsaday hub iyo gadiid intaba ayaa lagu yiri” ayaa lagu yiri qoraalka Taliska ciidamada Soomaaliland.
Sidoo kale Somaliland ayaa Puntland ku eedeysay in ciidamadeeda ay shalay weerareen guddoomiyaha Laasqoray, islamarkaana uu ka badbaaday isku day la doonayey in lagu dilo, sida ay hadalka u dhigtay.
Qoraalka ka soo baxay taliska ayaa sidoo kale lagu sheegay in Puntland ay daandaansi dagaal ka wado degmada Badhan iyo deegaanada ku xeeran.
“Waxaa jira inay Puntland ciidamadoodu weerareen shalay 25/2/2020 barasaabka laas qoray ee Somaliland isku dayeena inay dilaan , hase ahatee ilaahay ka badbaadiyay, waxay daandaasi joogta ku hayaan dadka Somaliland ee degan Badhan iyo degaanada ku hareeraysan” ayaa markale lagu yiri warka ka soo baxay taliska ciidanka Somaliland.
Dhanka kale ma jiro weli war rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca dowlad goboleedka Puntland oo ku aadan xiisadaha dagaal ee ka soo cusboonaaday gobolka Sanaag.
horey waxa loyir jeegsan been gama xishido waxa u shegayh somaliyey marka jeegan hadhageysani waxey sheygan gabla xala mayaqani waxey shegan run ha umalin jeegata hadhageysani somaliyey kuwa mesha kahadlayan wa kowa muuse handarab lagacta gaqadan runa mayaqani bye